I-99.9% yoogqirha baseMelika abayiboni i-Apple Watch njengesixhobo sonyango | Ndisuka kuMac
I-Apple Watch sisixhobo esiye kwiminyaka edlulileyo sincede abantu abaneengxaki zentliziyo kunye nokunye okuninzi. Enyanisweni, kunokwenzeka ukubala iimeko apho kubaliswa ukuba ngenxa yezoluvo kunye nokuqikelelwa komlindi, izifo ezithile zentliziyo ziye zabanjwa ngexesha elinokuthi liphelise ubomi baloo msebenzisi wewotshi. Nangona kunjalo, konke oku akwenzi oogqirha base-US bathembe esi sixhobo. Ngokwezifundo ezithile, I-99.9% yabo ayiyi kusebenzisa i-Apple Watch ekulandeleni okanye unyango lwezonyango. Nangona kunjalo, isetyenziselwa uphando kunye nemiphumo emihle kakhulu.
Nangona sinayo iimeko ezininzi zabantu abaye basindisa ubomi babo ngenxa yoluvo lwe-Apple Watch, Isazi ngengqondo yeklinikhi uMichael Breus uthi i-99.9% yabasebenzi bezonyango abakafuni kakhulu ukusetyenziswa kwayo kwicandelo lezonyango. Kwi inqaku elitsha elivela kwiFinancial Times, oogqirha abahlukahlukeneyo nabanye kwicandelo lezonyango baye bachaza ngokweenkcukacha ubunzima bokubandakanya i-Apple Watch kukhathalelo lwemihla ngemihla lwezigulane. Abanye bathi ikamva apho i-Apple Watch iphucula impilo yomsebenzisi kwinqanaba elikhulu lisekude kakhulu.
Ngoku, kwicandelo lophando, kubonakala ngathi i-Apple Watch inabalandeli bayo. Ngokutsho kweCDC, izifo ezingapheliyo zezona zinto ziphambili kwi-3.8 yeebhiliyoni zeedola ezachithwa eUnited States kukhathalelo lwezonyango eUnited States. Ngokuqhelekileyo zinokuthintelwa ngokwenza umthambo, ukutya, kunye nokubhaqwa kwangoko. Kukwinkalo yophando kunye nokubeka iliso apho kunokuba luncedo. Umzekelo:
UShruthi Mahalingaiah, umphandi waseHarvard, usebenzise izizukulwana ezininzi zeApple Watch ukulandelela Umjikelo we-ovulation wabasetyhini abangama-70,000 kwisifundo esikhulu.
UGqr. Richard Milani, usekela mongameli we-cardiology e-Ochsner Health, usebenzisa i-Apple Watch, phakathi kwezinye, ukubeka iliso kumanqaku edatha evela kumawaka ezigulane kunye nokusebenzisa ubukrelekrele bokwenza Ukuqikelela iziphumo kunye nokuqinisekisa ukuba ngabaphi abantu abanokuthi bagule kakhulu.
Kuya kufuneka sihlale silindele oogqirha ukuba basebenzise i-Apple Watch kwindawo ethe ngqo ngakumbi kunophando. Oku kuya kunceda ukwenza yangaphambili ibe yinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-99.9% yoogqirha baseMelika abayiboni i-Apple Watch njengesixhobo sonyango
IBluetooth yitekhnoloji enciphisa umgangatho wee-AirPods